सुन टल्काइदिन्छु भन्दै यसरी लट्छन् ? | Jukson
सुन टल्काइदिन्छु भन्दै यसरी लट्छन् ?
भदौ १४ काठमाडौं
गहना मैलोधैलो भएको छ ? चिन्तानलिनुस्, घरैघर सफा गरिदने समूह डुल्दै छन् । टलक्क टल्कने सफा गहना लगाउन चाहनाले यस्ता व्यक्तिलाई गहना सुम्पेर ढुक्क चाहिँ नहुनुस् किनकि तपाईं तिनिहरुबाट लुटिन सक्नुहुन्छ ।
सफा गर्ने बहानामा गाउँ–गाउँ चहार्ने समूहले सायन प्रयोग गरेर सुन लुटिरहेको पाइएको छ । पुराना गहना पनि एकैछिनमा टल्काइदिने भन्दै रसायन प्रयोग गर्ने लुटेराले प्रत्येक गहनाबाट थोर-थोरै सुन निकाल्ने गर्छन ।
३ महिनाभित्र अनलाइन टिकट सेवा सुरु गर्ने वायुसेवा निगमको तयारी
सरकार आफैं रोक्छ विद्युतीय बस